Maro no mieritreritra ny ambadiky ny programa fanofanana, fa mila miezaka ihany koa ny hozak'ity faritra ity. Voalohany, manan-danja izy ireo amin'ny fananganana tohatra tsara. Faharoa, tsy ho vita ny hahatratrarana tarehimarika tsara tarehy tsy misy lamandy. Ny fahatelo, ny hozatry ny hery hiverina dia manan-danja amin'ny fampandrosoana ny ampahany hafa amin'ny vatana.
Ny fandaharam-pampianarana dia tokony ho fampiharana izay azonao atao. Ankoatr'izany, ilaina ny manova tsy tapaka ny fiofanana, satria azo ampiasaina amin'ny enta-mavesatra ny hozatra, ka noho izany, tsy hisy vokany. Ny fampihetseham-po tsirairay dia tokony atao ao anatin'ny 2-3 sy sasany in-12-15.
Fanatanjahantena ho an'ny fanofanana miverina:
Hyperextension . Ataovy eo amin'ny banky manokana ny fanatanjahantena, alamino eo ambany tongotra. Arotsaha mba hahatonga ny fanamafisana ny ampahany ambony amin'ny feny, ary manindrona ny sandry eo amin'ny tratra. Tanjona: Mialà eo, mialà eo alohanao mandra-pahavitanao ny lamosinao. Mitsangàna, miverina amin'ny toerana voalohany. Ataovy tsikelikely ny zavatra rehetra mba tsy ho ratra.
Planck . Amin'ny fampiofanana any an-trano dia ilaina ny mampiditra ity fampiasana ity, satria tsy sarotra izany, nefa manome vokatra tsara izany. IP - ataovy eo ambanin'ny sorokao ny tananao, ary apetraho kely ny tongotrao. Ny vatana dia tokony mamorona tsipika, tsy tokony hatsangana amin'ny soroka ny soroka. Tazony ny bar mandritra ny iray minitra farafahakeliny. Mba hampihetsi-po ilay fampiharana, dia afaka manangana ny tongotrao na maninjitra tanana iray eo anoloanao.
Tendrombohitra mafy mafy . Ny fanofanana ny hozatry ny lamosina ao an-trano ary ny efitranony dia mety amin'ny fampiharana. Tsy ny trano rehetra dia misy bar, ka azonao ampiasaina ny lavenona. IP: ento ny barany mba hiatrehana ny palmie, ary henjana ny lohanao eo amin'ny lohalika. Ny tanjona dia ny manafatra, manongotra ny bar, manetsiketsika ny sandrinao ao anaty elany, izay tokony atosika akaiky amin'ny vatana. Amin'ny teboka farafaharatsiny, mitadiava faharoa ary miverena amin'ny fitaomam-panahy amin'ny toerana voalohany.
Superman . Amin'ny fampiofanana any an-trano dia afaka mampiditra io fanatontosana mahomby io ianao, izay tokony handainga amin'ny vavony. Mialà eo am-panafahana ny tongotrao sy ny sandrinao ary manamboara toerana mandritra ny segondra vitsy. Mitsangàna, ampidino ny vatana. Misy io fanatanjahan-tena io sy safidy hafa - raiso ny sandrinao sy ny tongotra mifanohitra, ary avy eo, miova. Amin'ity tranga ity, ny hetsika dia hitovy amin'ny nataon'olona iray nandritra ny dia.
Ahoana ny fananganana ny tratra?
Fanazarana ho an'ny vehivavy
Dingana ho an'ny fahazakana
Tabata - fampiasa amin'ny fahazoana mavesatra
Ny simulateur amin'ny tongotra sy ny rambony ho an'ny tokantrano
Fanatanjahantena ho an'ny fanontam-pirinty eo amin'ny banky
Fanatanjahana ny tongotry ny trano
Mandeha eo amin'ny tranokala noho ny fahaverezan'ny lanjany
Trano fanokafana kafe - fampiononana sy asa
Sneakers - Fashion 2016
Ny sainan'ny fahafatesana
Inona no hambaran'ny molotrao momba anao?
Chloe Greene nihaona tamin'ny fianakaviana "mpanao heloka bevava tsara indrindra": ilay tranga ho an'ny fampakaram-bady?
Fanangonana herisetra amin'ny fahavoazana
Tontolon'ny tsiro - maniry any ivelany
Ny tsy fahampian-tsakafo oviana sy ny bevohoka
Kurt Russell sy Goldie Hawn dia handeha eo ambany satroboninahitra
Plastika tsy misy sigara
Face Masika ho an'ny laminaria
Hira Glios 2014